Ahoana no hikarakarana saka iray volana | Noti saka
Maria Jose Roldan | | Fiompiana saka
Mahafatifaty ny saka zaza, fa rehefa mihaona aminy eny an-dalana ilaozana ianao na rehefa lavin'ny reniny izy ireo, raha tsy misy mikarakara azy ireo dia azo inoana fa tsy handroso izy ireo. Tena mampalahelo izany, fa ny tena izy dia: raha latsaky ny roa volana dia tsy hainy ny mitady sakafo, satria zara raha afaka mandeha tsara izy ireo.
Noho izany, raha nahita iray ianao dia holazaiko aminao ny fomba hikarakarana saka iray volana amin'izay, amin'ny fomba toy izany, dia afaka mitohy mitombo tsy misy olana.
1 Inona no ilain'ny saka iray volana?
2 Torohevitra hitomboany tsara
3 Inona no hatao amin'ny saka iray volana iray nilaozana
3.1 Aza manelingelina ny saka
4 Rehefa miverina miaraka amin'ireo zanany vavy iray volana ny reniny
5 Ahoana raha tsy miverina ilay reny
6 Nilaozana ireo zanany
7 Famahanana ireo zazakely vao iray volana nilaozana
Inona no ilain'ny saka iray volana?
Ny tadin'ny tanora toy izany dia mila izao manaraka izao:
Sakafo lena ho an'ny kittensNa dia efa manana nify zaza aza ity taona ity dia mbola mitombo ihany izy ireo. Noho io antony io dia zava-dehibe ny hanomezana sakafo malefaka azy tsy misy serealy, voaharo tsara, afaka hitsako izy nefa tsy sarotra. Toy ny amin'izao dia mihinana be dia be izy, ny filamatra dia ny manana feeder feno ho azy foana, na manome sakafo azy isaky ny telo na adiny efatra.
rano: ny mahazatra dia ny tsy tianao be aloha, fa tokony ho zatra tsikelikely amin'ny rano ianao. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manampy kely ny sakafonao ianao.
Toerana azo antoka, mahazo aina ary mafana: Mandany 20 ora isan'andro fatoriana ianao, ka mety kokoa raha ao amin'ny efitrano tsy misy drafitra ny fandrianao ary tena ahazoana aina.
Inona no sakafon'ireo saka rehefa kely izy ireo?
Torohevitra hitomboany tsara
Ilay saka, ankoatry ny sakafo, rano ary fandriana, hangataka fitiavana sy orinasa be dia be izy. Tena ilaina tokoa ny mandany fotoana betsaka araka izay azo atao miaraka aminy, ny fihazonana azy, ny fikolokoloana azy ary ny filalaovana azy, ohatra amin'ny tady. Marina fa amin'izao vanim-potoana izao dia mbola tsy mihazakazaka be loatra izy, fa kosa ny tongony manomboka manatanjaka ampy ka afaka manomboka miaina toy ny alika kely ny volony.
Ankoatra izany, mety amintsika ny mitondra azy any amin'ny vet amin'ny andro voalohany. Fa maninona Satria tsy maintsy ataontsika izay hahasalama azy. Tena ara-dalàna ny saka sendra very ny katsentsitra tsinay, ary ny reny mamindra azy ireo amin'ny zanany. Raha tsy volom-borona ilay saka dia ho hitantsika eo noho eo fa mihinana be loatra izy, mazoto ary be kibo mivonto. Mba hanatsarana, dia tsy maintsy manome syrup sy telmin Unidia mandritra ny dimy andro isika (na iray hafa lazain'ny matihanina amintsika).
Amin'izay dia afaka mihalehibe sy salama ny zanatsika kely.
Inona no hatao amin'ny saka iray volana iray nilaozana
Angamba ianao nanam-bintana nahita tovolahy iray volana na latsaka teny an-dalana, efa naheno ny fitomaniany avy tao an-tranonao ianao ary tsy afaka nanalavitra azy nitady azy raha mila fanampiana izy. Tsara ny nataonao satria afaka namonjy ny ainy ianao tamin'ny fihetsika nataonao.
Mieritreritra ve ianao fa mety nahita zanak'ondry nilaozana na fako aman-janaka? Eny, matetika ny saka reny dia tsy dia lavitra loatra ary mbola tsy nandao ny zanany. Ireto misy sosokevitra vitsivitsy momba ny tokony ho dingana manaraka.
Aza manelingelina ny saka
Ny tsara indrindra dia ny mijery lavitra aloha mandritra ny ora vitsivitsy mba hamaritana raha miverina any amin'ny toeram-pialofana izy. Mety mitady sakafo ny saka saka, miala sasatra, na miafina aminao aza.
Raha mahita zanakavavy ianao fa tsy ny reniny, dia miandrasa ora vitsivitsy alohan'ny hanavotana azy ireo. Ny zanak'olombelona dia manana vintana kokoa ho velona miaraka amin'ny reniny. Raha miverina ny reniny, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manisy sakafo sy rano saka vaovao. Tsara kokoa ny tsy manara-maso azy ireo mihoatra ny indray mandeha isan'andro mba tsy hanelingelina azy ireo.
Rehefa miverina miaraka amin'ireo zanany vavy iray volana ny reniny
Raha azo atao dia ento ao an-trano ny reniny sy ny zanany raha heverinao fa tandindomin-doza izy ireo any ivelany.
Ny akoho iray volana dia mila faritra tsara ho an'ny tenany miaraka am-pandriana, boaty fako madio, rano madio, ary saka saka. Ny zaza dia afaka misara-nono rehefa manomboka mihinana sakafo matanjaka amin'ny manodidina ny 4-6 herinandro.. Fa manolora sakafo mando mifangaro amin'ny rano aloha amin'ny 4 herinandro.
Rehefa nosarahi-nono feno tamin'ny reniny ireo zanany dia tsy maintsy alefa ny reny ary avy eo natsangana na niverina tany ivelany. Ny zaza amam-borona dia tokony ho salama ary horaisina manodidina ny 8-10 herinandro. Mitantana kittens matetika aorian'ny 5 herinandro mba hanampiana amin'ny fiaraha-miasa. Manantona mpitsabo vetivety avy hatrany raha mampiseho famantarana marary, ratra, na fahaketrahana ireo zana-tsaka na reniny.
Ahoana raha tsy miverina ilay reny
Raha nahita fako fatry latsaky ny iray volana na iray volana ianao ary tsy niverina ny reniny, inona no azonao atao? Mamela ny fianakaviana any ivelany izy io ary manome sakafo, rano ary fialofana. Hanetsika ny zanany angamba ny reniny, aza manahy.
Raha fantatrao fa toerana azo antoka ity misy loharanom-pahalalana azo antoka dia hiverina any aminy ianao. Raha mahay manolo-tena ianao dia tokony hesorina amin'ny reniny ny zanany rehefa afaka misakafo irery (4-5 herinandro eo ho eo). Rehefa entinao mody any an-trano izy ireo dia tantano matetika izy ireo mba ho zatra amin'ny fiarahan'ny olombelona.
Ny kittens dia tokony horaisina eo amin'ny 8-10 herinandro eo ho eo, araka ny noresahintsika tetsy ambony. Fa raha tsy miverina ny reniny dia tsy maintsy ho "reny nitaiza azy" ianao ary hanome sakafo azy ireo isaky ny adiny roa mandra-pahalàny ny fomba hamahanany ny tenany. Raha tsy azonao atao ny mamporisika sy mampifandray kittens dia avelao izy ireo! Aza mifanerasera amin'ny saka iray izay tsy azonao atao ny mijanona ao an-tranonao na mandray azy avy eo. Hianatra ny fahaiza-miaina amin'ny renin'izy ireo izy ireo izay hanome azy ireo ny vintana tsara indrindra hiaina any ivelany toy ny saka bibidia, raha sanatria ka miverina haingana na ho haingana ilay reny.
Nilaozana ireo zanany
Mety hitranga koa fa ny saka dia nilaozan'ny reniny. Amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny handinihanao lafin-javatra sasany. Toa nilaozana ireo zanany Inona no azonao atao hanampiana?
Raha vantany vao esorinao amin'ny faritra mampidi-doza eny an-dalambe ny zaza, tsy maintsy tazominao amin'ny hafanan'ny vatana mety izy ireo. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mampiasa boaty misy servieta madio sy malefaka ary tavoahangy manafana. Mamorona toeram-pialofana ao anaty boaty ary apetraho ao anaty ny zanany. Ataovy lavitra ny drafitra sy ny hamandoana izy ireo.
Mila efitrano hafanafana foana izy ireo. Kittens tsy voadio dia mila fikarakarana sy fanarahana 24 ora. Ny saka dia tokony homena tavoahangy miaraka amina mpisolo ronono isaky ny 2-3 ora (na amin'ny alina aza) ary hafana sy maina hatrany. Inona koa:
1 hatramin'ny 4 herinandro: tsy maintsy homena tavoahangy.
5 herinandro sy mihoatra- Sakafo am-bifotsy ihany no atolotra ho an'ny saka zazakely, fa mety mila homena tavoahangy tavoahangy. Ny sakafo am-bifotsy dia tokony ho mamy amin'ny endriny, tsy misy sakafo chunky na ampahany betsaka. Miezaha mitady ny saka kalety am-bifotsy tsara kalitao tsara indrindra ao amin'ny magazay fivarotana biby.
Raha afaka mandray an'io andraikitra io ny mpifanila vodirindrina aminao, ny namanao na ny havanao dia azonao omena fotoana ireo kitties nilaozana ireo! Raha tsy avelanao ny fandaharam-potoanao na ny adidinao, dia mety misy loharano ao amin'ny fiaraha-monina manampy anao, toy ny fikambanana miaro saka ary mahita azy ireo trano. Tandremo fa ny ankamaroan'ny toeram-pialofana ao an-toerana dia tsy misy mpiasa hamahana ny saka mandritra ny tontolo andro ary ny tahan'ny fahafatesan'ireto zanany ireto dia avo dia avo. Fa noho ny fanampianao dia afaka mamonjy ny ain'izy ireo ianao.
Famahanana ireo zazakely vao iray volana nilaozana
Aza omena ronono, soja na vary izy ireo. Fanoloana ronono (raikipohy saka) ary azo vidiana amin'ny fivarotana biby fiompy. Araho ny torolàlana momba ny fonosana amin'ny fanadiovana sy fanomanana tavoahangy ary ny tahan'ny fampifangaroana mety ho an'ny fanoloana ronono.
Aza atao afanaina mivantana ilay ranoka fa alao anaty tavin-drano mafana ilay tavoahangy hanafanana azy ary hizaha toetra ny tananao. Sasao ny tananao alohan'ny sy aorian'ny fikirakirana ny raikipohy ary fahano ny zanany.
Aza fahano amin'ny lamosiny ireo kittens (atsangano). Apetaho izy ireo ary atsangano moramora ny saokanao. Atsofohy miverimberina manoloana ny molotra sy ny siligaoma ny valanoranon'ny tavoahangy mandra-pahatonga ny saka hanandrana ilay formule ary voafatotra tsara aminy.
Aza adino ny manongilana ny tavoahangy mba tsy hikorotan'ny saka ny rivotra. Ny dropper dia mety ilaina mandritra ny herinandro voalohany na roa. Isaky ny sakafo fahatelo, manolora rano kely ao anaty tavoahangy hanombohana. Amin'ny ankapobeny dia hitsahatra tsy minono ny zaza rehefa feno. Aza mihinana haingana loatra na manery azy ireo. Ny zanany izay mihinana raikipohy dia mila milomano. Atao izany amin'ny alàlan'ny fihazonana azy ireo hiankohoka sy amin'ny fametrahana azy ireo eo am-pofoanao na amin'ny sorokao ary avy eo hikosehana moramora ny lamosiny.
Raha manana fanontaniana bebe kokoa momba ny famahanana kittens iray volana ianao dia miresaha amin'ny mpitsabo anao mba hikarakarana tsara ny ankizy amin'ny fotoana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Fiompiana saka » Ahoana no hikarakarana saka iray volana
Nahazo saka iray volana iray aho, mipetraka ao amin'ny trano misy filaharana faha-5 miaraka amin'ny lavarangana aho tsy afaka mitsambikina amin'ny lavarangana na varavarankely hafa.- Matahotra ny hamela azy handeha eo amin'ny lavarangana aho sao matahotra sao mitsambikina, (na dia hataoko ao anaty banga aza izany) 15 metatra ny rihana ambany .- Mbola tsy voaroaka izy, miandry aho mandra-pahatongan'ny 4 volana azy.- Amin'ny tany ambany dia misy saka malemy, mampidi-doza ve ny hitsambikinany ??????
Asio harato raha sanatria. Tena kely dia kely ny vidiny (any Espana ianao dia afaka mahita azy ireo amin'ny vola 4 euro) ary mamonjy ain'olona izy ireo.
Mandeha in-droa na intelo isan-taona ny fianakaviako. Inona no azontsika atao amin'ny saka, ary tokony hotehirizintsika izy io?
Valiny tamin'i Julia
Ny fanapahan-kevitra hijanona amin'ny saka na tsia dia tsy azonao raisina. Ankehitriny, ny idealy dia ny biby dia eo amin'ny toerana iray ihany, satria ny saka amin'ny ankapobeny dia tsy tia fanovana.